अबको केही वर्षमा पेट्रोलका गाडी विस्थापित हुन्छन्– प्रमोद भण्डारी [अन्तर्वार्ता]
काठमाडौं– पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको माग बढिरहेको छ । बजारमा विद्युतीय सवारीको माग बढेसँगै सबै अटो मोबाइल बिक्रेताहरुले नयाँ नयाँ इलेक्ट्रिक सवारीहरु भित्र्याइरहेका छन् ।
भर्खरै सम्पन्न नाडा अटो शो २०१८ मा पनि धेरै सवारी बिक्रेता कम्पनीहरुले विद्युतीय सवारी सार्वजनिक गरे । यसैमध्ये नेपालको चर्चित अटो मोबाइल गु्रप अग्नि गु्रप अन्तर्गतको अग्नि इनर्जी प्रालिले इ–भेरिटो लगायतका अन्य विद्युतीय सवारी साधन बजारमा ल्याएको छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीको अवस्था कस्तो छ, अग्नि इनर्जीको बजार के हो त हामीले कम्पनीका प्रमुख प्रमोद भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छौं ।
हेर्नुस्, भिडियो कुराकानी
कार्यस्थलमा यौन शोषण : किन खुल्दैनन् पीडित महिला ? [अन्तर्वार्ता]
कमल थापालाई प्रश्न- पूर्व राजासँगको भेटमा के कुराकानी भयो ? [अन्तर्वार्ता]
गुठी विधेयक फिर्ता भएपछि गरीब किसानहरू रोइरहेका छन् : शान्ता चौधरी [अन्तर्वार्ता]
सरकारले आग्रह गरे विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन सक्छु : देवेन्द्र पौडेल [भिडियो अन्तर्वार्ता]
अब बिजुली किन्ने होइन बेच्ने अवस्थामा पुग्दैछौं : कुलमान घिसिङ [अन्तर्वार्ता]
कांग्रेस सभापतिमा अब मेरो दाबी रहन्छ : गगन थापा [अन्तर्वार्ता]